बालश्रम बिरुद्ध बसन्तपुरमा कचहरी नाटक प्रर्दशन, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
बालश्रम बिरुद्ध बसन्तपुरमा कचहरी नाटक प्रर्दशन
काठमाडौं। बालश्रम बिरुद्ध बसन्तपुरमा कचहरी नाटक प्रर्दशन गरिएको छ।
अन्र्तराष्ट्रिय श्रम सगठनंले सन् २००२ देखि विश्वभर बालबालिकालाई श्रमबाट मुक्त गर्न यस वर्ष पनि अन्र्तराष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइएको छ। हरेक बर्ष जुन १२ मा मनाइने उक्त दिवसमा नेपालमा पनि श्रम विभाग, बाल कल्याण समिति, बिभिन्न संघ सस्थाहरुले जुन १२ बिभिन्न कार्यक्रम गरी मनाएका छन्।
बुधबार सेमिनार, बैठक, प्रभातफेरी, लगायतका कार्यक्रम गरी मनाइएको हो। शैली थिएटरले बालबिकास समाज र सेब द चिल्ड्रेनको सहयोगमा बिभिन्न १० ठाउँमा बालश्रम बिरुद्द कचहरी नाटक प्रर्दशन गरिएको छ।
कचहरी नाटकमा यस्तो देखाइएको छ। ‘आफ्नो बुवासंग बसेकी गौरीले एक रात नराम्रो सपना देख्छे । उसलाई अन्य बालश्रमिक जस्तै हातखुट्टा बाँधी काममा लगाई दुख दिएको हुन्छ। उ तर्सिन्छे कि कतै आफुलाई पनि यस्तै पो हुने हो कि? एक दिन गौरीको नजिकको नातेदार आउँछ र गौरीलाई सहरमा लागि पढाई दिइ सुखको दिन लिएर आउने सपना बाँडेर फकाउछ।
मन न लाइ न लाइ गौरी निकै आशा लिएर उ सहर पुग्छे। भिड भाड युक्त सहरमा उ बेचिन्छे र एक खाजा घरमा काम गर्ने बाध्य हुन्छे। बासी खाना र फोहोरी चिसो कोठाको भरमा उ आफ्नो साहुको निम्ति दिन रात काम गर्छे। भाडा र कपडा माज्दा माज्दा उ बिरामी हुन्छे। तर पनि उसलाइ गाली र धम्कि दिइ काम गर्न लगाइन्छ।
गौरी स्कुल जान चाहन्छे तर उसलाई झन काम लगाइन्छ। एक दिन उ आफ्नो घर फर्किन खोज्छे, सोहि क्रममा उसको मालिकले उसलाई समाती पिट्न खोज्दा सुत्रधारले नाटक रोक्छन। अनि सूत्रधारले दर्शक सामु गौरीलाई कसरी मुक्त गर्न सकिन्छ भनेर प्रश्न गर्छन। अनि दर्शकको सल्लाह अनुसार नाटक अघि बढ्छ। सो क्रममा गौरीले दर्शकको सल्लाह अनुसार पुलिस, छिमेकी, ग्राहक, समाजसेबी, आफ्नु बुवा, बालअधिकारको निम्ति काम गर्ने संघ सस्थासंग सहयोग माग्छिन। यो क्रममा शैलीका कलाकार मात्र होइन सल्लाहदिने दर्शक पनि अभिनय गर्न आइ पुग्छन।’
उक्त नाटक हेरेपछि बसन्तपुरमा प्रमुख अतिथि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले भने, ‘नाटकले वास्तविकता देखाएको हो तर सरकार बालश्रम रोक्न काम गरिरहेको छ। सरकारले सन् २०२५ भित्र बालश्रम मुक्त गर्न काम सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। सात बर्षपछि बालश्रम मुक्तगर्न क्याबिनेटवाट पास गर्न हामिले योजना पठाई सकेको छौ।’
बसन्तपुरमा जस्तै शैली थिएटरका कलाकारले गंगबु, स्वयम्भु, बानेश्वोर, लगनखेल, जावलाखेल, सातदोबाटो, सुर्यविनायक, कमलविनायक, च्यामासिंहमा रहेको स्कुल र सार्वजनिक स्थलमा कचहरी नाटक गौरी मन्चन गरे।
आर्यन न्यौपानेको निर्देशनमा तयार भएको यो नाटकमा रोबिन तामाङ्, श्रस्था घिमिरे, स्नेहा पौडेल, सुबास सुबेदी, सुजन माली, देबेन्द्र बब्लु, सशांक बोहोरा, शालिग्राम गौतम, बिज्ञान सापकोटा, सागर, सम्भब, बिशाल र जीवनको अभिनय रहेको थियो। शैली थिएटरका अध्यक्ष, नबराज बुढाथोकी, यो नाटक राजधानी भन्दानी ग्रामीण भेगमा आवश्यक छ जताबाट गौरी जस्ता पात्र ठुलो सपना बोकी सहर आउँछन वा पठाइन्छ। हामी सरकार, अनि सघ सस्थाको सहयोगमा त्यस्ता ठाउँमा पनि पुग्ने योजना बनाएका छौ।